တရုတ် 576 × 576-A အလူမီနီယံသေတ္တာစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Ruichen
1. အရွယ်အစား： 576*576*70mm
2. အလေးချိန်: 4.8kg
3. မော်ဒယ်: P3/P6
4. ပစ္စည်း: လူမီနီယံအလွိုင်း
၅။ တပ်ဆင်ခြင်း၊ လွှင့်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းတပ်ဆင်ခြင်း
6. အသုံးပြုမှု: အိမ်တွင်း/ပြင်ပ
၇။ ဆက်စပ်ပစ္စည်း: မြန်သောသော့များ၊ လက်ကိုင်များ၊ စနစ်/ပါဝါတပ်ဆင်ခြင်းပန်းကန်၊ ဆက်သွယ်မှုအပိုင်းအစ
8. Cabinet အရောင်: အနက်ရောင်၊ အပြာရောင်၊ အနီရောင်
9. တံခါးအရောင်: အနက်၊ အပြာ၊ အနီရောင်
PCB ဘုတ်အဖွဲ့ P3/P6mm
လေယာဉ်ကိစ္စ အမှုတစ်ခုတွင် 6pcs ကက်ဘိနက်၊ ကိစ္စတစ်ခုတွင် 8pcs အစိုးရအဖွဲ့
Hinging beam ဖြစ်သည် အလင်းတန်းတစ်ခုတွင် ၁ PC ဗီရိုကိုကိုင်ထားသည်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 200W-5v40a, 300W-5v60a
ပါဝါနှင့်ဒေတာချိတ်ဆက်မှု 20A 3*2.5㎡ နိုင်ငံအဆင့်အတန်း
၃။ Ultra-light၊ အလွန်ပါးလွှာသည်
၄။ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်အညီ၎င်းသည် ၀.၀၃ မီလီမီတာ၏ CNC သည်းခံမှုမှတဆင့်ဖြစ်သည်
5.High ကြံ့ခိုင်မှု, တာရှည်ခံ, ကြီးစွာသောအပူ dissipation
၆။High universality ကိုပြင်ပနှင့် indoor အတွက်သုံးသော module drawing အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်
၇။ ၎င်းသည်ဆားနှင့်မြူစမ်းသပ်မှုကို ၄၈ နာရီကြာသည်
၁။ ပျံသန်းခြင်းကိစ္စ၊ လေယာဉ်ကိစ္စသည်အဓိကအားဖြင့်သေတ္တာနှင့်အလူမီနီယံအငှားဗီရိုအတွက်တင်ရန်နှင့်တင်ရန်ပိုအဆင်ပြေသည်။ ၀ ယ်သူများသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ငွေပေးချေရန်လိုသည်
၂။ သစ်သားကိစ္စ၊ သစ်သားကိစ္စသည်မျက်နှာပြင်ကိုရွေ့လျားနည်းသောကြောင့်အများအားဖြင့်တည်နေရာ၌အမြဲတမ်းပြင်ပေးသည်။ သစ်သားထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးမှုသည်စျေးသက်သာသည်။ ၀ ယ်သူများသည်သစ်သားအ ၀ တ်များကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ပေးချေရန်လိုသည်
၃။ Pallet: Pallets များကိုသမားရိုးကျအရွယ်အစားရှိသောဗီဒိုအချို့ကိုအဓိကထားပြီးထုပ်ပိုးသည်၊ ၎င်းသည်အထုပ်၏အခမဲ့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ယခင်: 640 × 640-B အလူမီနီယံသေတ္တာ
နောက်တစ်ခု: 576 × 576-B အလူမီနီယံသေတ္တာ
အလူမီနီယံအလွိုင်း Die Case
Front Service Die Case ဖြစ်သည်
မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း Die Case
Aluminium Die Case ငှားရမ်းခြင်း
၉၆၀ × ၉၆၀-မဂ္ဂနီစီယမ်သေဆုံးမှုအခြေအနေ
768 × 768-B အလူမီနီယံသေတ္တာ
၆၄၀ × ၄၈၀-အလူမီနီယံသေတ္တာတစ်လုံး